people Nepal » के गर्दै छ गरिबी निवारण मन्त्रालय ?: मन्त्री भन्छन् ‘मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ’ के गर्दै छ गरिबी निवारण मन्त्रालय ?: मन्त्री भन्छन् ‘मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ’ – people Nepal
के गर्दै छ गरिबी निवारण मन्त्रालय ?: मन्त्री भन्छन् ‘मन्त्रालय खारेज गरे हुन्छ’
चैत १२, काठमाडौं – सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् ।
देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
सहकारीहरूलाई अनुदान वितरणका लागि कार्यविधिसमेत मन्त्रायले बनाएको छ । ‘पहिला दुई-तीन करोड रूपैयाँसम्म सहकारीलाई दिन सकिने व्यवस्था थियो, तर अहिले कार्यविधि बनाएर ३० करोडसम्म पुर्याएको छौं,’ प्रधानले भने । उनका अनुसार त्यस्तो रकम सहकारी डिजिजन कार्यालयबाट नै दिइनेछ ।